Samaritana: Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Samaritana: Fahasamihafan'ny versiona
Endrik'io pejy io tamin'ny 30 Novambra 2019 à 19:35
43 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 30 Novambra 2019 à 19:31 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 30 Novambra 2019 à 19:35 (hanova) (esory)
=== Fiheveran'ny manampahaizana ===
Ny fivavahan'ny Samaritana, izay mifototra amin'ny [[Torah]], dia tsy ahitana soritra fomban'ny mpanompoampanompo sampy. Tamin'ny taonjato faha-6 dia nitantara ny [[Bokin'i Jeremia]] fa nanao fanatitra tao amin'ny [[Tempolin'i Jerosalema|Tempoly]] izy ireo.
Ny soraratr'ireo [[raby]] tamin'ny fotoana nanombohan'ny fisian'ny fivavahana kristiana dia milaza fa ny fanomponfanompoan'ny Samaritana an'Andriamanitra tokana dia efa nisy hatramin'ny andro taloha ela. Ny fanangonam-pitsipika '''Houllin'' dia manaiky ny henam-biby novonoin'izy ireo ho ''kasher'' (כשר), izany hoe azon'ny Jiosy hanina, raha nisy Jiosy nanatrika ny famonoana izany<ref><small>Fampianarana ao amin'ny Talmoda '''Hullin'', 3b.</small></ref>, ary ny boky atao hoe ''Orlah'' ao amiamin'ny [[Talmodan'i Jerosalema]] dia manaiky koa ny mofo nadrahoinnandrahoin'izy ireo<ref><small>Talmodan'i Jerosalema, ''Orlah'', ii. 7.</small></ref> nefa misy fapetra izany. Misy soratra hafa ao amin'ny Talmodan'i Jerosalema nosoratana tokony ho tamin'ny taonjato voalohany izay milaza fa ny sakafon'ny Samaritana dia ara-dalàna<ref><small>Talmodan'i Jerosalema, ''Abhodah Zorah'' v. 4</small></ref>. Ny soratra iray hafa koa, ny ''Massecheth Kuthim,'' dia manamafy ny fanekena amin'ny ampahany azy ireo: "oviana no azo ekena ho isan'ny vahoaka jiosy izy ireo? Rehefa miala amin'ny tendrombohitra Garizima izy ireo sady manaiky an'i Jerosalema sy ny fitsangan'ny tena amin'ny maty"<ref><small>''"Massecheth Kuthim",'' Kirchheim, ''Septem Libri parvi Talmudici'', pp. 31-36.</small></ref>. Io soratra io ihany dia miaiky fa ny ankabeazan'ny fanaon'ny Samaritana dia itovizan'izy ireo amin'ny Israelita.
Noho ireo antony ireo dia be mpanaraka ny petra-kevitra izay manohana fa ny 80%n'ny mponina tao amin'ny Fanjakan'i Samaria dia nanohy noina tao ihany fa tsy natao sesitany, ka ireo no nanjary Samaritana (amin'ny dikan'io teny io ara-pivavahana) araka ny ambaran'ny [[Bokin'ny Mpanjaka]]<ref><small>Israël Finkelstein, Neil Asher Silberman, ''La Bible dévoilée, Les nouvelles révélations de l'archéologie,'' 2002, p. 256.</small></ref>. Ireo izay natao sesitany nefa vitsy dia mety nifangaro amin'ny vahoaka manodidina rehefa ela ny ela.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/977855"